NIDAAMKA WARAABINTA EE DALKA OO LEH GACMAHOODA: FUDUD OO WAX KU OOL AH! - DHISMAYAASHA
Dhirtayadu waa xayawaankayaga, laakiin marar badan ma joogi karno iyaga saacad kasta.
Haddii aad la socoto dhibaatadan, fiiro gaar ah u waraabinta waraysiga beerta beerta iyo beerta khudradda - tani maaha kaliya inaad ka badbaadiso booqashooyinka maalinlaha ah ee kuyaala guriga, laakiin sidoo kale lacag ayaa lagaa keydiyaa.
Ha u maleyn in "automatic" ay ku lug leedahay qalab aad u fara badan, taas oo weliba, qarashkeedu noqon doono dammaan.
Nidaamka waraabinta tooska ah waxay noqon kartaa mid sahlan, aan qabyo ahayn oo jaban, iyo ninkii beerta hareerihiisa ah wuxuu awoodi doonaa inuu ku sameeyo gacmihiisa.
Qodobkani waxaan kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo nidaamka biyaha ee dalka, iyada oo aan loo baahnayn caawinaad takhasus leh. Laakiin ka hor this - talooyin yar oo ku saabsan waraabinta habboon ee dhirta.
Way adagtahay in la qiyaaso hoyga aan lahayn dusha hoosteeda oo ay ka qarineyso roobka ama qorraxda. Waxaan samaynaa xayawaan si aad gacmahaaga u siiso.
Halkan fiiri sida loo sameeyo quudinta shimbiraha dibadda.
Wax badan ka baro sida loo sameeyo barn: //rusfermer.net/postrojki/hozyajstvennye-postrojki/vspomogatelnye-sooruzheniya/stroim-saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-bystro-i-nedorogo.html
Sidee loo dhisaa dhirta dalka?
Qaar ka mid ah talooyin ku saabsan waraabinta dhirta agagaarkaaga:
waraabinta dalagyada beerta iyo dalagyada beerta waa inay ahaadaan nidaamsan. Waa inaysan ku xirnayn xaaladaha cimilada ama haddii ay biyo ku siiyeen xagaaga xagaaga. Biyaha waa in lagu hayaa "ku jirtaa";
roobka dhowaan macnaheedu maaha in dhirta aan la waraabin karin! Mararka qaarkood xitaa roobka ugu xoogan kuma qulqulo ciidda. Xaqiiji xaaladda xayawaanka Si fudud: ku dheji farta dhowr mitir ah. Haddii aad rabto, calaamadaha gaarka ah waxay iibiyaan muraayadaha roobka;
Waa suurad wacan in ay biyaha waraabiyo dhirta inta aan qorraxda lahayn. Waa wax macquul ah waraabinta waxay ahayd fiidkiimarka qorraxdu horey u dhacdey, cimiladu waa degan tahay. Dabcan, haddii aad raaxo badan tahay, waxaad beerta beertaada u karin kartaa aroortii hore, ka hor qorraxda. Waraabinta inta lagu jiro maalinta, inta lagu jiro kuleylka, waxay noqon doontaa mid waxtar leh.;
Si loo fahmo sida loo habeeyo warshadda, waa lagama maarmaan in la baro wax kasta oo ku saabsan. Tusaale ahaan, dhirta qaarkood waxay waxyeello u tahay biyaha caleemaha.
Maxay yihiin hababka waraabka?
Waxaad u badan tahay inaad la socotid nidaamyada waraabka ee hoose: waraabinta iyo tuubada. Dabcan, way sahlan yihiin in la isticmaalo oo uma baahna kharashka, laakiin tani waa kaliya marka ugu horeysa ee la eego!
U wareejinta waraabinta (oo ma fududa) dhamaanba beerta, waxaad ku qaadataa tamar iyo xoog badan. Haddii aad xisaabiso inta biyo ah ee loo isticmaalo waraabinta siyaabo sidan ah, markaa lacagtii wareega ee lacagta ayaa soo baxda.
Gabagabo: waraabinta biyaha iyo tuubadu aad ayay qaali u yihiin, marka la barbardhigo inaad ku badbaadin karto waraabinta.
Sidee? Aynu mar kale ka hadalno habka waraabka waraaqda ah. Ma tixgelin doonno kuwa u baahan kharashyada muhiimka ah. Xooga saar kuwa leh nasiib-baraha beerta. Tani, gaar ahaan:
Biyaha waraabka adoo isticmaalaya tuubooyin.
Waraabka waraabka adoo isticmaalaya dhalooyin caag ah.
Waraabinta waraabka - Nidaamka waraabka beerta ee biyaha laga helayo qaybo yaryar oo joogto ah oo loo yaqaan "sax".
Badanaa, waraabka faleebadu wuxuu si toos ah uga dhexjiraa biyaha geedka. Ha u maleyn in dhibcigu uusan qoyin ciidda: dhammaan qoyaanka ayaa ku dhacaya nidaamka xididka.
Wixii soo saaris ah ee waraabka faleebo isticmaalida tuubooyinka, waxaad u baahan tahay wax yar: taan biyo leh, dhumuc dhuuban iyo dhowr tubbo dhuuban, jeexjeexo (tusaale ahaan, qaybta caagga ah ee dhibcaha caafimaadka).
Wixii kale ee kala duwan ee waraabka faleebo, wax ku dhow uma baahna: kaliya dhowr dhalooyin caag ah.
Waxaan ku dhejin karnaa raaxo iyo wax ku ool ah - waxaan ka dhigneynnaa wadooyinka beerta leh gacmahayaga!
Qaababka rasuubiyeynta: http://rusfermer.net/sad/yagodnyj-sad/posadka-yagod/aromatnaya-malina-vybor-sortov-i-osobennosti-vyrashhivaniya.html
Sidee loo doortaa waraabinta?
Maxay u banneeyaa qaar ka mid ah doorbidaa "tubooyinka" waraabka, iyo dambe - in "dhalada"?
Waxay ku xiran tahay nooca beertaada, meesha sariiraha, tirooyinka dalagyada iyo waxa aad koraan.
Waraabinta waraabinta waxay ku haboon tahay oo keliya dhirta kuwa lagu taliyey in lagu waraabiyo geedo waraab ah. Intaa waxaa dheer, isticmaalka nidaamkan waraabinta sida ku habboon beerta yar.
Haddii aad leedahay beer beer khudradeed oo waaweyn, dalagyo badan oo waxay u baahan yihiin oo kaliya in ay biyo nadiifiyaan nidaamka xididka, ka dibna nooca bacda ayaa adiga kuu ah!
Ka hor inta aanad bilaabin rakibidda waraabka faleebo, hubso in sarihiinnu ay ku yaallaan barbaro, dhirta ayaa u dhow midba midka kale. Intaa waxaa dheer, beerta waa inay noqotaa meel loogu talagalay tuubo waaweyn - wadada weyn.
Nidaamka waraabinta ee dalka oo leh gacmahooda
Miyaad go'aansatay inaad sameysid nidaamka waraabka ee tuubada gacmahaaga? Ha baqin, tani ma ah wax adag. Qodobkani waxaan tixgelineynaa oo kaliya hababka waraabinta beerta, oo qof kastaa uu iskood u samayn karo.
Nidaamka waraabka ee tuubooyinka isticmaalida tubooyinka
Waxaad u baahan doontaa:
kaydka kaydka iyo kaydinta biyaha (1.5-2 m dhulka kor ku xusan);
weyn oo tuubbo dhagan;
tuubooyin yar oo khafiif ah (10-15 mm), iyadoo ku xiran tirada sariiraha;
walxaha qaybta balaastigga ee dhibcaha caafimaad (mastar);
xarkoodyada tuubooyinka dhuuban.
Yar yar: cabir kasta sariiraha, ka dibna jar tuubooyin dhuuban si aad ugu haboonaato. Ku xidh tuubo weyn oo taangiyo biyo ah si ay uugu dhejiso sariiraha. Ku rakib tuubka yar wax ka yar xagga hoose ee foostada / taangiga.
Khabiiradu waxay kugula talinayaan in ay doortaan tuubooyin PVC ah (nooc ka mid ah dhuumo caag ah), waxay cufan yihiin, jaban mana cabsanayaan heerkul sare. Tuubbada PVC waxay ku habboon tahay tuubada ugu muhiimsan ee nidaamkaaga waraabka. Tuubooyinka khafiifka ah ee sariiraha ayaa ka wanaagsan inay iibsadaan polyetylene - waxay yihiin kuwa ugu caansan oo aan ka cabsanin dhaxan.
Ku xidh tuubooyinka khafiifka ah tuubada ugu weyn ee caawinta marin-biyoodka, oo horay loo qodo tirade ku haboon ee godadka.
Ku dheji tuubooyin faleebo isku mid ah sariiraha. Tuubo kasta, samee godado yar yar oo ka mid ah walxaha nidaamka dhibcaha la geliyo.
Meelaha waa in loo sameeyaa si toos ah u dhow xididka geedka, dhir badan oo badan - godad badan. Dhabarka gadaal kasta oo khafiif ah ku dheji bareesada.
Ka hor inta aadan tijaabin nidaamkaaga waraabka, ka saar bareesooyinka "biyaha" adoo isticmaalaya tuubooyinka: tani waxay kuu sahleysaa inaad ogaato haddii nidaamkaagu uu khaldanyahay. Haddii aad dareentid cillad, isla markiiba hagayso.
Sidoo kale waxaad ogaataa sifooyinka wanaagsan ee blueberries.
Sida loo qalajiyo miskaha Rose ee qalajiyaha, akhriyo by guji xiriirka: //rusfermer.net/forlady/konservy/sushka/kak-sushit-shipovnik-pravila-sushki-i-hraneniya-retsepty.html
Nidaamka waraabinta waraabka adoo isticmaalaya dhalooyin caag ah
Nidaamka hore ma u muuqdaan kuwo aad u adag oo qanciya, ma sameeyaan? Hadday sidaas tahay, midkani xitaa wuu sahlanaan doonaa. Wixii soo-saarkeeda waxaad u baahan doontaa dhowr dhalooyinka caaga ah ama weelasha.
Mabda'a hawlgalka ee nidaamkan, waxaa laga yaabaa inaad hore u fahantay: godadka waxaa lagu sameeyey dhalada, dhibcooyinka dhicida geedka.
Si kastaba ha noqotee, nidaamka sida fudud waxaa jira laba ikhtiyaar:
Dhalada dhalada ah Ku dheji buurta sare ee duurka - tusaale ahaan, laba ul oo alwaax ah dhinacyada dhinacyada dhulka, mid iyaga ka mid ah - marka la barbardhigo. Ugu dambeyntii ku xir dhalada balaastig ah oo biyo ah, ka dib markaad daloolka ka samayso ama laba ka mid ah. Daboolin qoorta. Hubso in taageeradu ay tahay mid xoogan oo baadiyaha aan ku dhegsanayn ulaha.
Dhalooyinka ku jira dhalooyinka loogu talagalay waraabinta dhulka hoostiisa. Iska yaree hoose ee dhalada (weelasha waaweyn ayaa halkan ku haboon), adeeq qoorta. Samee meelo dhowr ah oo ku yaal labada dhinac ee dhalada (cufnaanta carrada - meelo badan oo ah 4 - ugu badnaan). Bury dhalo 15 cm dhulka kudhexeysa labada duurka. Ku buuxi dhalada biyo. Hadda waxay si tartiib tartiib ah uga daadin doontaa godadka iyo cunista xididdada geedka. Nidaamkan waraabinta wuxuu soconayaa 2-4 maalmood, iyada oo ku xidhan mugga weelka.
Xitaa haddii aad ku cusub tahay beerta, waxaad si sahlan u sameysan kartaa nidaamyada waraabinta biyahaaga.
Waxaad u baahan doontaa wax yar: qalab yar oo aad ka iibsan karto dukaanka khaaska ah, rabitaanka ah inaad ku raali noqoto dhirtaada biyo joogta ah iyo sabir yar! Waxaan hubnaa inaad ku guuleysan doontid!